FIFIDIANANA DEPIOTE : Vita antsapaka ny laharana ho ao amin’ny biletà tokana ao Toamasina
Natao ny zoma 22 marsa tao amin’ny efitrano malalaky ny lapan’ny Faritra Atsinanana ny antsapaka amin’izay ho laharan’ny kandidà anaty biletà tokana amin’ny fifidianana solombavambahoaka ao Toamasina I. 24 mars 2019
Tompomarika amin’izany ny Céni izay nahitana ny filohan’ny kaomisionina misahana ny fifidianana eo anivon’ny distrikan’i Toamasina I ( CED) ary ny filohan’ny kaomisiona provinsialin’ny fifidianana Toamasina.
Tonga niatrika izany ny ankamaroan’ireo kandidà ho depiote. Ireto farany izay miisa 12 raha 13 no nanatitra dosie. Tsy feno ny antontan-taratasin’ilay faha-13 tonga teny amin’ny Ovec ka nolavin’ ny Céni.
Nialoha ny nirosoana tamin’ ny fanaovana antsapaka, dia nisy ny fandaminana sy toromarika nomena ireo mpifaninana. Nampanarahina tamin’ny filaharan’ireo kandidà tonga nanatitra dosie filatsahan-kofidiana ny fanaovana izany antsapaka izany. Eo amin’ny laharana faha-5 no misy ny kandida Tody Arnaud, izay avy amin’ny tsy miankina. Ny laharana fahavalo kosa no ahitana ny kandidà narotsaky ny Vovonana Isika rehetra miaraka amin’ny Filoha Andry Rajoelina. Nilain’ireo kandidà ny fahavitan’io antsapaka io. Manomboka izao dia efa afaka manonta afisy ahitana ny laharany anaty biletà tokana ny kandida tsirairay.
Taorian’ny antsapaka natao, nisy ny antso avo nataon’ny filohan’ny CED Toamasina I sy ny filohan’ny kaomisiona provinsialin’ny fifidianana Toamasina ho an’ireo kandidà mba hifanaja mandritra ny fampielezan-kevitra. Tokony tsy mifanakona afisy. Tokony hanaja mandrakariva ireo toerana azo anaovana fampielezan-kevitra ireo kandida. Hajao ny lalàna, hoy ny avy eo anivon’ny rantsa-mangaikan’ny Céni.
Samy nahazo ny laharany koa ireo kandidà depiote ao Mahajanga
Natao ny zoma maraina teo, tao amin’ny biraon’ny Ovec ny fisarihana ny laharan’ireo kandidà hilatsa-kofidiana ao amin’ny distrikan’i Mahajanga voalohany. Nanatrika izany ireo kandida depiote na ny solontenany, ary izy ireo rahateo no nisarika ny laharana tao anaty vata. Hita tamin’izany àry fa Tilahimena Samuel no laharana voalohany. Randrianantenaina Matinen Eusèbe kosa no faharoa, Assy Anziza Said no fahatelo, Razafindrazana Samson no fahaefatra ary Randrianantenaina Vévé no fahadimy.
Afakandro Christian kosa no fahaenina, Raharison Hajaniaina Michel na Jajah no fahafito, Aimé Tony Yssouf no fahavalo, Razafindrainibe Jean Arnaud fahasivy ary Rajaonarison Christian no fahafolo. Amin’ny laharana faharoa farany kosa no misy azy mianadahy efa solombavambahoaka teo aloha, ka faha-14 Rahantanirina Lalao depiote avy amin’ny Vovonana isika rehetra miaraka amin’ny Filoha Rajoelina, faha-15 kosa Nicolas Stephan Patsouris. Mialoha azy ireo Azaly Failaza Cortigo Anjara faha-11, Harisoa Gamy Caffasson kosa ny faha-12 ary Miza Annie no faha-13. Efa samy mahalala ny laharana misy azy avy ka efa manomana ny fampilezan-kevitra izy ireo.
Asa soa moa no tena ampiasan’izy ireo handresen-dahatra ny vahoaka. Efa maro amin’izy ireo rahateo no fantatra amin’ny fanaovana asa soa. Araka ny lalàna dia nangatahana izy ireo hanendry mpitam-bola ara-taratasy ary ny mpitam-bola hanaiky ny fanendrena azy. Nanome toromarika vitsivitsy maromaro an’ireo kandida ihany koa moa ireo ao amin’ny Ovec.